Ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Ihany no afaka Mampiaraka toerana ho an'ny tovovavy, ny vehivavy, ry zalahy, ary ny olona avy any Los Angeles, ary te-hihaona olonaNy olona izay hihaona amin'ny Mampiaraka toerana efa samy hafa tanteraka ny tombontsoam - tsotra, karajia, namana mba hitady azy, tia ny fikarohana ho lasa tia, fifandraisana matotra, ny fanambadiana, ny ankizy sy ny maro hafa. Fotsiny Ny Fitiavana.
Izany no tadiavinao.
Izay mahita tovovavy Shinoa ao Beijing-Mampiaraka ny manam-Pahaizana ao Azia
Beijing mety ho ny toerana tsara indrindra ho an'ny tovovavy Shinoa mba hihaona sy ny daty (amin'ny Shenzhen sy Chengdu koa mifaninana fa ny anaram-boninahitra)Izay no mahatonga azy tsaratsara kokoa noho ny hafa tanàna Shinoa. Satria Beijing dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao Shina, dia mahazo ny sasany ny mafana indrindra Sinoa vavy izay tonga teto avy amin'ny lafivalon'ny firenena mba hitady fahafahana.
Maro amin'izy ireo no mafana ampy mba ho lasa modely sy ny mpilalao sarimihetsika.
Ary ny ankamaroan'izy ireo dia misokatra kokoa ny fihaonana amin'ny vahiny noho ny amin'ny tanàna hafa.
Fa tsy toy ny ao Shanghai, dia tsy hahita maro dia maro ny volamena mpitrongy tany.
Zazavavy izay avy any Beijing dia matetika eo ambany ambenana an-trano, mampihomehy, hafahafa sy mety hampahasosotra. Ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny tovovavy mandritra ny andro, mandrakariva, dia ny tanàna Soliton.
Mandeha manodidina Soliton amin'ny Talaky masoandro ny faran'ny herinandro tamin'ny mey, matetika aho no mahatsapa ho toy ny zaza ny vatomamy store.
Misy tsy vitan'ny hoe be dia be tena manintona ny tovovavy eto, fa Soliton ihany koa ny toerana lehibe mba hihaona. Ivelany, amin'ny tany anivon'ny, dia maro ireo toeram-pivarotana izay afaka miantsena na miantsena manodidina. Izany fiantsenana foibe midina ao amin'ny ambany rihana, izay misy ihany koa ny sarimihetsika teatra sy ny lehibe store amin'ny maro ny zavatra madinika toy ny satroka sy ny hatramin'ny kilalao tiany indrindra kilalao fa dia mahafinaritra ny milalao miaraka. Ny fahatelo dia tany amin'ny tanàna feno trano fisakafoanana, trano fisotroana sy trano fisotroana kafe, ary raha reraka ianao, dia afaka foana ny mandeha miaraka Gomti Avaratra-dalana mba Soliton SOHO, izay saiky toy ny an-tanàna. Hafa be ny toerana ho an'ny andro malaza Alley ny Hutong, fa izay feno olona ao amin'ny Talaky masoandro ny faran'ny herinandro.
Avy tany, dia afaka mandeha ho Huhai, tsara tarehy lake amin'ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana teo akaiky teo.
Amin'ny ririnina, dia afaka handeha tia manao ski ambony ao Huhai, izay mahatonga ny ririnina daty lehibe.
Ao amin'ny vanin-taona mafana, ny toerana tena ny toerana fivoriana dia Chaoyang Park, ny lehibe indrindra Park ao an-tanàna, na Ritan Valan-javaboary sy ny olo-malaza vato Sambo fisotroana kafe. Farany, raha toa ka hita any avaratra andrefan'i ampahany amin'ny tanàna akaiky Wudaokou, ny Tsinghua na Beida toeram-pianarana dia toerana lehibe mba hihaona any ivelany, raha Tetezana Cafe manolotra cozy-jorony izay afaka mankafy ny fomba Tandrefana brunch, mofo voasesika sy ny kafe. Rehefa latsaka ny alina, ny sasany ao Shina ny tovovavy tsara tarehy indrindra any Gongti, na ny mpiasa kianja, voahodidina trano fandihizana sy ny fisotroana.
miaraka amin'ny Sanlitun bar an-dalambe, any fotsiny ny minitra ny tongotra lavitra, ireo faritra roa mahaforona ny ampahany lehibe indrindra ao an-tanàna nightlife.
Gongti ny toerana tena toerana ahitana ny fifangaroana sy ny entana fitaterana. Ho hitanao ato ny ankamaroan'ny modely sy ny mpilalao sarimihetsika, ary koa ny maro manan-karena solontenan'ny taranaka faharoa. Amin'ny rendrarendra ny orinasa izay dia mety indrindra ny mahita tovovavy mafana (tsy mafana tahaka ny mpiteny anglisy) izay miteny malagasy, jereo ny Xiyu bar ao amin'ny Valan-javaboary Hyatt, na Hamirapiratra eo an-toerana. Nandritra ny alina, ny fivoriana, tsy ny maresaka, langilangy sy trano fisotroana tao Gongti sy Sanlitun, ary hiverina ho amin'ny Huthong na Huhai distrika, izay misy am-polony maro ny lehibe am-ponja. Ankoatra izany, raha toa ianao ka eo amin'ny lafiny Andrefana, Wudaokou dia maro ny fikambanana sy ny am-ponja ny toerana misy ny avo fitanana ny Oniversite sy mpianatra iraisam-pirenena. Dokam-barotra sy ny fikambanana ny roa lahy, ny fihetseham-po, dia angamba no tena malaza sy ny toerana tsara indrindra mba haka ny zazavavy, na dia ny tsara dia matetika tsy ho avo toy ny ao amin'ny Gongti sy Sanlitun. Beijing tena mahafinaritra ny tanàna rehefa tonga ny fivoriana ny vehivavy, na dia ny biby amin'ny alina na misafidy ny ho ao am-pandriana amin'ny Kapoaka ny dite maitso rehefa ny tanàna jiro manomboka namirapiratra. Ny zavatra lehibe momba ny tanàna dia maro ny harena miafina fa afaka mandany taona mitrandraka azy rehetra. Izao no fotoana hanombohana.
maimaim-poana ny olon-dehibe mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat ny taona olon-dehibe Mampiaraka toerana mba hitsena ny lehilahy video Mampiaraka amin'ny zazavavy chat lahatsary an-tserasera ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana mahafinaritra ny fisoratana anarana amin'ny finday ny sary lahatsary tsara indrindra Mampiaraka sary Mampiaraka ny fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy fisoratana anarana